कस्ता बिरामीले खान हुँदैन मासु ?::Best News Experience from Nepal
मासु ठिक्क मात्रामा मात्रै खानुपर्ने डा.उप्रेतीको सुझाव छ। अत्याधिक मात्रामा चिल्लोयुक्त र मसलेदार मासु खाँदा तत्काल असर नदेखिए पनि केही दिनपछि विस्तारै समस्या देखापर्ने डा. उप्रेतीले बताइन्।
हाल नेपालमा मधुमेह, मुटुका बिरामी, युरिक एसिडलगायत रोगका बिरामी बढीरहेका छन्। यस्ता रोगीले रातो मासु खाँदा स्वास्थ्यमा झन् असर पर्ने डा. उप्रेतीले बताइन्।
दसैंमा आफन्तकामा पनि गइने हुँदा त्यहाँ पनि विचार गरेर ठिक्क मात्रामा खानुपर्छ। आफ्नो मन थाम्न नसकेर आवश्यकभन्दा बढी खानेकुरा खाने बानीले स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ। रक्तचाप बढी भएका, युरिक एसिड भएका मानिसले भित्री अंगका मासु तथा रातो मासु खाँदा उनीहरुको शरीरमा ठूलो क्षति पुग्ने डा.उप्रतीले बताइन्।
‘मासुमा धेरै प्रोटिन हुन्छ, थोरै मात्रामा मासु सेवन गर्दा भने शरीरलाई फाइदा पुग्छ’, डा. उप्रेतीले भनिन् ।
कस्तो मासु नखाने:
मासुको बढी प्रयोगले युरिक एसिडको समस्या आउँने डा. उप्रेतीको भनाइ छ। त्यस्तै, रातो मासुले नकारात्मक असर गर्छ । बोसो तथा छाला रहित मासु खाने गरेमा हानी कम हुन्छ। रगत पकाएर रक्ती बनाएर खानुलाई पनि खासै उपयोगी मानिंदैन । यस्तो मासुको प्रयोगले खाएको केही समयभित्र नै झाडापखाला चल्ने, अपच हुने, ग्याट्रिक बढ्नेलगायतका समस्या हुने डा. उप्रेतीले बताइन् । उनले मासुबाट रोगहरु सर्नसक्ने कुरामा सधैं सचेत रहन सुझाव दिइन् ।
सुरुमा खसी बोका कुखुरा च्याङग्रा किन्दा नै मेडिकल डाक्टरले स्वस्थ्य छ भनेर प्रमाणित गरेको मात्रै किन्नुपर्ने डा. उप्रतीले बताइन् । त्यसरी सम्भव नभए नजिकैको पसल, जहाँ आफूलाई विश्वास लाग्छ त्यहीबाट मात्र मासु किन्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् उप्रतीले बताइन् । जहाँ पायो त्यहिँबाट मासु लिनु नहुने भन्दै डा. उप्रतीले मासु लेराइसकेपछि राम्रोसँग पकाएर मात्रै खान सुझाव दिइन् ।
राम्रोसँग नपाकेको मासुले शरीरलाई हानी गर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । मासुमा राँगा खसी भन्दा कुखुरा, माछा स्वस्थ्यकर हुने बताइन्छ । खसीमा रेडीमेट बढी हुन्छ । छाला खाँदा पनि पाचन प्रक्रियामा असर गर्ने डा. उप्रतीले बताइन् । छालामा धेरै बोसो हुने भएकाले त्यो स्वस्थ्यकर हुँदैन । पोलेर साँधेर भुटेर राखेको मासुमा क्यान्सर बनाउने तत्व हुने डा. उप्रेतीले बताइन् ।
उनका अनुसार त्यस्तो मासुले पाचन प्रक्रियालाई राम्रो गर्दैन । दशैंमा मीठो बनाउनु पर्छ भन्दै अनावश्यक मरमसला हाल्न तिर लाग्न नहुने डा.उप्रेतीको सुझाव छ । उनले मासु बनाउँदा हरेक कुरा कम गर्नुपर्ने बताइन् । जस्तैः नुन, मसला तेल । मासु पकाउँदा सामान्य तरिकाले पकाउनु उत्तम हुन्छ ।setopati
बाँके । काँक्राको चिराजस्तै सर्लक्क परेको एघार हात जग्गामा छाप्रो छ ।...
बाँके । भेरी अस्पतालमा मिर्गौलाका बिरामी दैनिक बढेका छन् । तर,...
एजेन्सी।यो एउटा यस्तो स्थिती थियो जसबारे भारतको धर्मनगरी हरिद्वारको पुलिसले कहिले...
समयमा उडान नहुँदा यात्रुहरुलाई सास्ती
सिमकोट। दसैँ मनाउन घर जाने यात्रुहरुले कम उडान हुनु, त्यसमाथि मौसम...
आज १६ असोज २०७६ बिहिबारको राशिफल
मेष- हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिको विचारले प्रभावित तुल्याउन सक्छ ।...
यात्रुहरुले सास्ति ब्योहोर्न नपर्ने गरि गाडिहरुको ब्यवस्थापन
सूर्य भुसाल अर्घाखाँची । देउराली यातायात प्रालि अर्घाखाँचीका अध्यक्ष योगेन्द्र खड्काले चार्डबार्डका...
अफगानिस्तान । अफगानिस्तानको पूर्वी प्रान्त नान्र्गाहारमा नेटोआवद्ध संयुक्त सेनाले इस्लामिक स्टेटस...